Drama, Essays.. » ဘုန်းကြီးအုပ်​ချုပ်​တဲ့တိုင်းပြည်​	16
ဘုန်းကြီးအုပ်​ချုပ်​တဲ့တိုင်းပြည်​ ကျုပ်​ ဒီလို​ပြောလိုက်​လို့ ခင်​ဗျားတို့စိတ်​ဆိုးမလား ? ဆိုးချင်​ရင်​လည်း ဆိုး​ပေါ့ဗျာ ။ ဆဲချင်​သပါ့ ဆိုလည်း ပြိုင်​ပြီး ဆဲဖို့ အဆင်​သင့်​ပဲ ။ ကျုပ်​က ကျုပ်​စိတ်​ထဲမှာ မှန်​ပြီလို့ယူဆထားတဲ့ ကိစ္စ ဆို ဘာနဲ့လာထားတား ​ပြောကို​ပြောရမှ ။ ဒီအ​ကြောင်းကို ကျုပ်​က ​ပြောချင်​​နေတာကြာပြီ ။ ခု​တော့ အဲ့ အ​ကြောင်း​ပြောပြီဗျာ ။ မကြားချင်​ မဖတ်​ချင်​လည်း ​ကျော်​သွား ။
တိုင်းပြည်​ အုပ်​ချုပ်​​ရေး ယန္တယား​ပေါ် ​ရောက်​ရှိ​နေပြီး ​ရောက်​လာလတ္တံ​သော လူကြီးမင်းများက ခိုင်​မာတဲ့ ဥပ​ဒေ ​တွေပြဌာန်းပြီး ​ကျောသားရင်​သားမခွဲခြားပဲ မအုပ်​ချုပ်​တတ်​ဘူးဆိုရင်​ ။ တာဝန်​ယူမှု တာဝန်​သိမှု နဲ့ ကင်းလွတ်​ပြီး ငါတ​ကော​ကော​နေကြဦးမယ်​ဆိုရင်​ဖြင့်​ ခင်​ဗျားတို့လည်း လွှတ်​​တော်​ကြီးထဲ အိပ်​ငိုက်​ရတာ ပင်​ပမ်းပါတယ်​ ။ ပင်​ကိုယ်​စိတ်​ထဲက မပါပဲ လူအထင်​ကြီး​အောင်​​နေရတဲ့ ကိစ္စ ​အောင့်​အီးပြီး လုပ်​ပြမ​နေကြပါနဲ့ ။ ခင်​ဗျားတို့ အစား ကျုပ်​တို့ ဘုန်းကြီး​တွေကိုပဲ အုပ်​ချုပ်​ခိုင်းလိုက်​​တော့မယ်​ ။ ဒါကမှ တိုင်းပြည်​ အတွက်​ တစ်​စုံတစ်​ရာ ရ​ကောင်း ရနိုင်​ပါလိမ့်​မယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီ
2015 Sep 24 About naywoon ni
မြစပဲရိုး says: ရွဲ့ပြောသလား၊ တကယ်ပြောသလား။ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်။ lol:-)))
kai says: တကယ်ဖြစ်နေတာ….
မြန်မာက…အခုမှဖြစ်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ရွဲ့​ပြောတာ အရီး ​ရေ
အင်း​ပေါ့​လေ အတည်​အခန့်​​တွေ​ရေး​နေကြဆို​တော့လည်း ​မေးယူရ​အောင်​ဖြစ်​​နေပြီ ။ ( ကွကိုမှ အဲ့သလိုမ​ပြောရင်​​ပြောမဲ့သူမရှိလို့ :P
ဇီဇီခင်ဇော် says: အကိုမောင်ဦးလေးဘကြီးး အပေါင်းးတို့..
Mike says: အစိုးရ ဆိုတဲ့ အဖွဲ့က ​ရှေး​ခေတ်​က ရှင်​ဘုရင်​​တွေလိုပဲ တာဝန်​မဲ့ ​နေပြီး တိုင်းပြည်​ရဲ့ ပညာ​ရေး ကျန်းမာ​ရေး လူတစ်​​ယောက်​ချင်းစီရဲ့ လုံခြုံ​ရေး စတာ​တွေကို တာဝန်​ယူမ​ပေးနိုင်​ဘူးဆိုရင်​ ……………
တိုင်းပြည်​ အုပ်​ချုပ်​​ရေး ယန္တယား​ပေါ် ​ရောက်​ရှိ​နေပြီး ​ရောက်​လာလတ္တံ​သော လူကြီးမင်းများက ခိုင်​မာတဲ့ ဥပ​ဒေ ​တွေပြဌာန်းပြီး ​ကျောသားရင်​သားမခွဲခြားပဲ မအုပ်​ချုပ်​တတ်​ဘူးဆိုရင်​ ။ တာဝန်​ယူမှု တာဝန်​သိမှု နဲ့ ကင်းလွတ်​ပြီး ငါတ​ကော​ကော​နေကြဦးမယ်​ဆိုရင်​ဖြင့်​ ….. .အမှန်ပဲဆြာနီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကဲ.. အခု ဥပဒေတွေတော့ ထုတ်လိုက်ပါပြီ… ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ တိုင်ချင်ရင် တရားရေးရာကိုပဲ တိုင်ရမှာမို့လား.. တရားရေးရာကရော ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးမတဲ့လား… အရင်လိုပဲ အဂလိလိုက်စား.. လာဘ်ယူပြီး လျစ်လျူရှုထားရင် မဘသ ကို တိုင်ရမှာလား.. မဘသ က ထောင် (၇) နှစ်ဆိုတာကို တန်းချပေးမှာလား.. ဒီခေတ်ထဲမှာက သိတဲ့အတိုင်း ရုံးရောက် ဂတ်ရောက်ရင် ပိုက်ဆံက သောက်သောက်လဲ ကုန်တာ… ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲ တရားစွဲလို့ရပြီလား.. ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲ တရားရင်ဆိုင်လို့ ရပြီလား… ရှေ့နေငှားခက လွဲလို့ ဘာတစ်ခုမှ ထပ်မကုန်ဘဲ တရားရင်ဆိုင်လို့ ရပြီဆိုရင် အဲဒီဥပဒေတွေရော … အဲဒီ မဘသ ကိုရော .. အဲဒီ ပါတီတွေကိုရော အကုန်ထောက်ခံပစ်လိုက်မယ်..
may july says: ဟိုးးအရင်ခေတ်တွေက ဘုန်းကြီးတွေ အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာ အစစ်အမှန်ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်လို့ရတာလေ ..
naywoon ni says: ဟို အရင်​​ခေတ်​တုန်းကလည်း လူ​တွေရဲ့ လိုအပ်​ချက်​​တွေ လိုက်​လုပ်​ရင်းနဲ့ ဘုရား​ဟော နဲ့​သွေဖယ်​​နေခဲ့တာ ထည့်​မတွက်​​တော့ဘူးလား ။ မင်းတုန်းမင်း​ခေတ်​က ပြည်​သူ​တွေ ဒီမိုက​ရေစီ​တောင်းခဲ့ရင်​​တောင်​ မင်းတုန်းမင်းနဲ့ ဘုန်​ကြီး​တွေ ခုလက်​ရှိအ​ခြေအ​နေအတိုင်း လုံး​ထွေးမ​နေဘူးလို့ ​ပြောနိုင်​ပါ့မလား ။
@QUIL@ says: မထူးပါဘုဗျာ…. အရင်ခေတ်ကလည်း…
kai says: စကားလုံးတွေတင်.. အပေါ်စီးယူထားယုံမက.. လက်တွေ့ဆက်ဆံမှု.. လူမူရေးဆက်ဆံမှုအပြုအမူလည်း… အပေါ်စီးယူသဗျ..။
Pyae Htoon says: ခုနောက်ပိုင်း ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးမဆုံမိအောင်နေမိလေ့ရှိတယ်။ စကားအသုံးအနှုန်းကိုဘ၀င်မကျတာကြောင့်ရယ်၊ နောက်ပိုင်းဖတ်မိတယ့် အခုလိုမျိုးစာတွေကြောင့် စဉ်းစာကြည့်မိပြီး သိပ်စိတ်မ၀င်စားတော့တာပါ။ အထူးသဖြင့် ဦးဝီရသူ ပြောတဲ့ဟာတွေ တချို့ကြည့်မိပါတယ်။ တော်တော်လေးဆိုးပြီး တော်တော်လေးမုန်းမိပါတယ်။
uncle gyi says: သူကြီးလက်သုံးစကားလေးမမြင်မိပါလား
ဦးကြောင်ကြီး says: အရှိကို အရှိအတိုင်း မြန်တျန့်သာသနာကို မြင်ရတာပါပဲ။ သဂျီးပေါဒဲ့ အစိမ်းဝတ် အဝါဝတ်တွေ .. ။ အနည်းဆုံးတော့ တိုင်းပြည်ကိုဆွဲခြတာ တမျိုးထဲ မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားတာပေါ့..
ဦးဦးပါလေရာ says: .အားလုံးရဲ့ အဓိကက ဘာသာရေး(ဘယ်ဘာသာကိုမဆို၊ဗုဒ္ဓဘာသာအပါအ၀င်)ကို
kai says: အစိမ်း၁ + ဗျို့…
ဒီလောက်ဘာသာရေးက..ကမောက်ကမလုပ်ပြနေတာတောင်.. စစ်တပ်က.. ကိုင်လုပ်နေတာပါလို့.. ထင်သူတွေကရှိသေး…။ စနစ်ကြောင့်.. မဟုတ်…။
aye.kk says: အရင်က